MACLUUMAADKA TARANKA TEXAS HEELER DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Texas Heeler Dog iyo Sawirro
Eyga Lo'da Australiya / Eyga Udhiigga ah ee Doorka Australiyaanka ah
Blue the Texas Heeler (Australian Lo'da Doug / Australian Shepherd Dog mix breed) waa shaqaale Texas Heeler ah iyo xoolo dhaqato heer sare ah!
Texas Heeler ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Eyga Ustaraaliya iyo Eyga Adhijirka ah ee Australia . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Ogsoonow: Doorka 'Australian Cattle Dog' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler, Blue Heeler, Red Heeler, Australian Cattledog iyo Australischer Treibhund.
ARF = Aasaaska Cilmi-baarista Xayawaanka
'Tani waa Miloh oo jirta 1.5 sano. Waxaan ka helay qoys u guuraya guri aan u oggolaanayn xayawaanka rabaayadda ah sidaa darteed waa inay ku qasbaan isaga ka takhalus . Isagu waa nooc ka mid ah isugeynta Texas Heeler. daacad u ah cilad iyo jecel inuu dhaqdo . Waxaan leenahay digaag oo uu wax ku cuno iyaga oo qumman. Isagu weligiis muu muujin calaamadda gardarrada eey kale ama aadanaha oo aan arkay. Isaga ayaa ugu badan dabeecad saaxiibtinimo eey kasta oo aan abid leeyahay. Isagu waa gacaliye dhammeystiran wuxuuna ku raaxeeyaa shirkadda mid kasta oo aan u soo bandhigo. Mararka qaarkood Eyga Ustaraaliya isaga ayaa ku soo baxa oo wax yar ayuu diidayaa, laakiin ugu dambeyntii marwalba wuu dhagaystaa. Runtii waxaan dareemayaa inuu ku dadaalayo inuu aniga iga farxiyo. Isagu waa saaxiibkayga ugu fiican waxaanan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay qoyskayga. '
'Sam waa Texas Heeler-iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Ustaraaliya iyo Blue Heeler. Waalidiintiisa labaduba way ka diiwaangashan yihiin kana soo baxeen eeyaha WGC Field Trial. Sam waa eeyga ugu awoodda badan ee aan waligey ku raaxeysto inaan la shaqeeyo ciribtire dabiici ah oo wadis xoog leh leh laakiin sirdoonka iyo dabeecadda Adhijirka Australia. Isagu waa 60 rodol, wuxuu dabiici ku ahaa addeecidda iyo dhaqaaqa iyo dhaqashada / ciribta. Wuxuu soo xereeyey arigii deriska oo wuxuu dib ugu celiyey xayndaabka dooxada halka ay iskood uga soo baxeen ka dibna ku soo noqdeen guriga ka dib shaqadiisii ​​kadib. Digaaga ( digaag , turkiga , guineas iyo 1 Swan ) si xor ah ujirta marka Sam ilaaliyo. Si joogto ah ayuu wax u dilaa suumanka , guntin iyo dabocase hat ku dhiirado inuu dhibo adhigiisa, haddana ah shimbiraha cun cunnadiisa eygiisa isaga oo dul taagan. Xitaa wuxuu qaatay coyotes inkasta oo uusan dhammayn coyote-ka, haddana dib uma soo noqon. Intaas waxaa sii dheer, Sam wuxuu had iyo jeer u diyaar garoobaa ciyaar soo doonasho ama la ciyaarista carruurta. Sida eey beeraha ah, wuxuu ku fiicnaaday meel walba oo halkan ah. '
Sam waa Texas Heeler, iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Australiya iyo Blue Heeler.
'Kani waa Gracie, waa 5 sano jir markaan qaadanay sawirkan. Waan ogeyn inay tahay Shepherd Australian / Australian Cattle Dog mix, laakiin ma aanan ogeyn inuu jiro magac kuwaa! Iyada iyo qashinkeeda waxaa laga soo tuuray gaari boorso ah oo ku jira jawaan waddo mashquul badan ka hor intaysan xitaa lahayn wax ilko ah ma naqaanno sababta. Saaxiibkey ayaa markhaati ka ahaa ficilkan wuxuuna ii badbaadiyey Gracie aniga inaan fiiriyo maxaa yeelay waxay ahayd midab buluug ah sida eyga aan ugu jeclahay taariikhdeydii hore. Waxay ahayd inay dagaalyahan noqoto maxaa yeelay waxay ku jirtay salka hoose ee jawaanka jawaankeeda waxayna la kulantay suul jaban. Waxaan rajeynaynay inay noqon doonto Adhijir Aussie ah, laakiin ka dib markii tababaraha eygu fiiriyey iyada, waxaa nalooga digey inay tani tahay Eyga Lo'da ama isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Cattle Dog mix' oo ay u baahan tahay wax ka qabasho adag laga bilaabo da'da hore. Talo ayaa la qaatay! Gracie aad buu u awood badnaa wuuna ila dagaalamay hogaamiyaha xirmada magacaabid bilowgii hore. Ma aqaano haddii ay xitaa noolaan lahayd haddaan ahayn Cesar Millan iyo mabaadi’da aan ka baranay daawashadiisa. Ninkayga iyo aniga meelna ugama nihin u diyaar garowga wax ka qabashada eey kan gardarrada ah nafteena mahadsanid wanaaga tababarahayagu ku takhasusay eyda raacaya wayna ogayd waxay samaynaysay.
'Gracie waa qof caqli badan oo garanaya ugu yaraan 200 oo ereyo kala duwan, oo ay ku jiraan toy kasta oo kala duwan oo ku jira sanduuqa ay ku ciyaarto iyo magacyada mid kasta oo ka mid ah seddexdeena. bisadaha . Sababtoo ah caqligeeda, waxay ku fiicneyd fasalada adeecida, laakiin way iska diidday inay sameyso khiyaanooyin iyada oo aan loo eegin nooca abaalmarinta ay bixisay waa sida haddii ay ogtahay inaysan ujeedo lahayn. Waxay doorbideysaa inay noqoto eey kaliya oo ay maalintii banaanka joogto oo habeenkii soo gasho habeenkii si ay waqti nalala qaadato oo ay sariirteeda ugu seexato. Iyadu ma ahan xannaaneeye ama aad u taabasho-xun, laakiin waxay ku raaxeeysataa xoqin caloosha wanaagsan iyo dhabar-jabinta joogtada ah. Iyadu waa xoolo dhaqato yaab leh , laakiin waxay haysataa oo keliya bisado ay adhiga raacdo. Habeen kasta, waxaan u bixi doonnaa barxadda dambe oo waxaan ka shidan doonnaa nalalka waaweyn, oo iyadu waxay hoos dhigtaa hooskeena sida waalan! Way adag tahay in la siiyo jimicsi inta ay u baahan tahay, si hufan. Way jeceshahay xaafadda dhex wareega oo aad nala dalxiis tagtid.
'Haatan markay weynaatay, waxaan dhihi lahaa iyadu waa gal qurux badan oo isku dheelitiran oo xoogaa ka nasasho badan inta ay wax ka qabaneyso. Daaweynteeda ay jeceshahay waa lafo Dingo waaweyn-weligay ma arag a qayilay iyada oo kale! Isla markiiba way adeecdaa amarrada, laakiin iyadu waxay maalin kasta i tijaabin doontaa fursad kasta oo aan wax uga 'iloobo'. Fagaarayaasha dhexdiisa, il gaar ah ayaan ku hayaa iyada cabirkeeda iyo awoodeeda (50 rodol) laakiin marwalba sifiican ayey udhaqantaa.
'Caawinta badbaadinta Gracie iyo iyada oo xubin ka ah qoyskeenna waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabihii iigu adkaa ee aan abid sameeyo, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu abaalmarinta badan. Xaqiiqdii weligeen ma illaawi doonno.
'Sydney waa Texas Heeler, ama iskutallaab u dhexeysa an Eyga Ustaraaliya iyo Adhijirka Ustaraaliya . Waxaa laga soo badbaadiyey xarunta xayawaanka ee maxalliga ah ka dib markii looga tegey sida eey. Waxay hada sanad jirsatay waqtiga sawirkaan, waana xubin qaali ku ah qoyskeena. '
Sydney the Texas Heeler (Australian Shepherd / Australian Blue Heeler mix) at 2½ sano jir— 'Waxay ku saabsan tahay 30-35 lb. waxayna taagan tahay wax ka yar 20 inji garbaha. Waxaan ka qaaday sawirkan iyada iyo 'ilmaheeda'. Waa toy-ga ay ugu jeceshahay ee ay meel walba la joogto. Sydney waa eey aad u caqli badan, daacad ah oo kalgacal leh. '
Matilda the Texas Heeler oo 2 sano jir ah (hooyadu waa aabe reer Australia ah oo aabe ah waa Eyga lo'da Australia)
Mitzvah the Texas Heeler (iskudhafka udhaxeeya Eyga Australiya iyo Shepherd Australian) - Waxay ahayd eeygii ugu fiicnaa ee aan abid haysto. Dabeecad madax adag oo xoog leh oo dabeecad iyo dabeecado Door Australian Cattle, diyaar u ah inay ka farxiso, jecel yahay inuu ciyaaro kacsan, xoogaa xukuma (eeygayga kale hortiisa, kan lab Basenji ah), laakiin aad u macaan oo kalgacayl.
Davy the Texas Heeler puppy at 2 ½ bilood jir— 'Tani waa Davy Crockett McFerren (oo leh magac sidan oo kale ah in uu haysto waxyaabo badan oo uu ku noolaado). Davy waa a Buluug Heeler (Eyga Ustaraaliya) Adhijirka Ustaraaliya isku dar. Waxaan ka soo helay guri daryeel korineed oo u dhow halka aan ku noolahay halkan Texas. Isagu waa macaan badan yahay, laakiin dabeecadda Eygiisa ee loo yaqaan 'Loattle Dog' ayaa mar mar soo baxda oo wuxuu u janjeeraa inuu ka shakiyo shisheeyaha, mararka qaarkoodna wax yar buu ka boodaa. Laakiin markii uu dego oo uu barto iyaga ayaa ah saaxiib cayaareed wanaagsan - ama xannaaneeye. Isagu waa caqli badan yahay (aad buu u caqli badan yahay, mararka qaarkood!) Oo dhaqso ayuu wax u bartaa. Wuxuu leeyahay waqtiyo xunxun mararka qaarkood. Kadibna waxaan ugu yeernaa 'Davy Jones.' Sanduuqa cunuggiisa waxaan ku naanaysnay 'Davy Jones' Locker. ' Markay tahay waqtigii la seexan lahaa, waxaan dhahnaa, 'Davy Jones' Locker with you! ' Davy wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro oo uu u ordo sida waalan agagaarka guriga. Wuxuu jecel yahay inuu kaligiis ku ciyaaro alaabtiisa, sidoo kale ... inuu hawada ku tuuro ka dibna uu daba ordo, oo uu ku dul fuulo, oo uu u ruxo inta uu kari karo. Waa maxay male weyn. Qaar ka mid ah naanaysyadiisa kale waa 'Buluug,' Laddie, '' Slim, 'ama' Slim Blue. ' Wuxuu jecel yahay banaanka wuxuuna doorbidayaa inuu banaanka banaanka inta badan joogo (xitaa roobka.) '
Davy Texas Heeler isku dhafka ah sida eey markay tahay 5 bilood jir
'Kani waa Ellie, oo ah Shepherd Australian iyo Australian Heeler oo isku jira 3 bilood. Iyadu waa qof aad u caqli badan, aad u cod badan oo aad u kacsan mararka qaarkood. Waxay kaloo jeceshahay inay ku jiifsato dhabta dhabta, dhunkasho iyo inay raacdo gaariga. Iyadu doqon bay noqon kartaa hal daqiiqo oo diirada saareysa daqiiqada xigta. Waxaan u arkaa iyada inay tahay eey adag, laakiin xaq u leh qadarka dhaqdhaqaaqa iyo kicinta eey cabsi badan. Haatan waxay ku dhowdahay sanad waxayna isu diyaarineysaa adeecid iyo tababar deg deg ah.
Ellie the Australian Shepherd / Australian Heeler mix brey puppy at 3 bilood jir (Texas Heeler)
Eeg tusaalooyin badan oo Texas Heeler ah
Texas Heeler Sawirada 1
Texas Heeler Sawirada 2
Texas Heeler Sawirada 3
tilmaamaha jarmalka isku-darka shaybaarka madow
pyrenees weyn isku darka retriever dahabka
xadka collie tilmaamaha macluumaadka isku dhafan
3 usbuuc daryeel puppy puppy